# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:40 PM0comments links to this post
हिन्दू संस्कृतिको मुख्य विशेषताका रुपमा मानिने आध्यात्मिकतासँग व्यक्तिको सामाजिक हैसियतको परिभाषा निरपेक्ष रहन सक्दैन भने आधुनिकता मोडर्निज्म भनिने 'प्याराडाइम' को सापेक्षता नहेरी पश्चिमा सोच प्रष्टिँदैन । कम्तीमा पनि कति चाहिँ भन्न सकिन्छ भने सहस्राब्दियौंदेखि प्रवाहमान मान्यताहरुलाई यथेष्ट नबुझी कुनै समाज विशेषमा व्यक्तिको भूमिकालाई कसरी परिभाषा गर्ने भन्ने सवालमा स्पष्टता आउँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हिन्दू मान्यता र पश्चिमा मान्यता आ-आफ्ना बृहद् परिप्रेक्ष्यबाट निरपेक्ष रहेर परिभाषित हुन सक्दैनन् ।
आचार्य चाणक्यलाई पश्चिमाहरु मेकियावेलीसँग तुलना गरेर बुझ्ने गर्छन् । तर यसरी तुलना गर्नु अनुपयुक्त भएको भारतवर्षीय दर्शनका ज्ञाताहरुको ठहर छ । जीसस क्राइस्टलाई 'लाइट् अफ् वल्र्ड' र भगवान् बुद्धलाई 'लाइट् अफ् एसिया' भनेर बुद्धलाई पश्चिमाहरुले न्यूनाङ्कन गरेजस्तै गलत मनशाय वा संस्कृत शब्द 'धर्म' को अंग्रेजी उल्था "religion" भनेर गरेजस्तै अज्ञानता चाणक्यलाई मेकियावलीसँग तुलना गर्नुमा पनि छ भन्ने गरिएको पाइन्छ । यस लेखको विषय-परिधि भन्दा बाहिर पर्ने भएकाले हामी त्यस बारेमा विस्तृत चर्चा गर्दैनौं । यहाँ हाम्रो चर्चाको केन्द्रबिन्दु चाणक्य नीतिशास्त्रमा आचार्यले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सम्बन्ध बारेमा सारा वैदिक दर्शनको सारलाई एउटै श्लोकबाट कसरी खिचेका छन् भन्ने चाहिँ हो । त्यस बारेमा उनको मतलाई प्रसिद्ध पश्चिमा दार्शनिक जोन स्टुआर्ट मिलको मतसँग तुलना समेत गरिएको छ ।
दार्शनिक जेरेमी बेन्थमका अनुयायी तथा लण्डन रिभ्यू र वेस्टमिन्स्टर रिभ्यूका सम्पादकका रुपमा बौद्धिक जगतमा ख्याति कमाएका मिल १७ वर्षको उमेरमा इस्ट इण्डिया कम्पनीका कर्मचारी बने भने कम्पनी बन्द भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गरी सांसद भएका थिए । सांसदका रुपमा उनको भूमिका उल्लेख्य रह्यो- उनले महिला मताधिकार मजदुर वर्गको हित र भूमिसुधार सम्बन्धमा विशिष्ट योगदान पुर् याए । बहुआयामी व्यक्तित्वका धनी यी दार्शनिकको बारेमा एकजना लेखकले भनेका छन् - उन्नाइसौं शताब्दीका सबै भन्दा बुद्धिमान र सबै भन्दा उदार व्यक्तिहरुमध्ये जेएस मिल एक हुन् ।
मिल भन्छन्- कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वको पूर्ण विकासका लागि स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । उनको दर्शनको सार हो - "प्रत्येक व्यक्तिको आफू आफ्नो शरीर र आफ्नो मस्तिष्कमाथि सम्प्रभुता हुन्छ ।" व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि कुनै दैवी शक्ति कुनै व्यक्ति कुनै राज्य वा कुनै लोकपि्रय सरकारले समेत बाधा पुर् याउन नसक्ने भन्दै वैयक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षमा मत उनले व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक कार्यका सम्बन्धमा भने उनी असीमित स्वतन्त्रताका पक्षपाती होइनन् । मिल भन्छन्- "व्यक्ति आफ्ना कार्यका लागि त्यति हदसम्म मात्र स्वतन्त्र छ जबसम्म उसको कार्यले अन्य व्यक्तिलाई हानी पुर् याउँदैन ।" मिलको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधार सुखसिद्धान्त हो भन्ने यहाँनेर हामीले ख्याल राख्नु पर्छ । उनले व्यक्तिले आफ्नो सुखका लागि स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने र स्वतन्त्र कर्म गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा पैरवी गरेजस्तै एक व्यक्तिले राखेको विचार र गरेको कर्मले समाजका अन्य व्यक्तिले दुःख नपाऊन् भन्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यसरी हेर्दा उनले पैरवी गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नैतिक बन्धनयुक्त छ ।
चाणक्य भन्छन्- "कुलको भलाइकोलागि एउटालाई त्याग्नू गाउँकोलागि कुललाई त्यागिदिनू । देशको हित हुन्छभने लागि गाउँलाई त्याग्नू र आत्म-कल्याणकोलागि समस्त पृथ्वीको त्याग उचित हुन्छ ।"
यसआधारमा सरसरी हेर्दा हिन्दू विचारधारा समष्टि-प्रधान रहेको छ- किनभने यसले भन्दैछकि कुलको भलाइको लागि एउटालाई त्याग्नू गाउँको लागि कुललाई त्यागिदिनू तथा देशको हित हुन्छ भने त्यसका लागि गाउँलाई त्याग्नू । योभन्दा ठूलो समूह-प्राधान्य कहाँ हुनसक्छ ! तर "आत्म-कल्याणकोलागि समस्त पृथ्वीको त्याग उचित हुन्छ" भनेकोलाई कसरी हेर्ने नि ! यता मीमांसा-दर्शनको धारणा छकि सारा संसार एकातिर र वेदको आदेश एकातिर छभने पनि वैदिक मत नै मान्य हुन्छ । वैयक्तिकताका यस्ता साक्ष्यहरुलाई देख्दादेख्दै "पूर्व" समष्टि-प्रधान वा समूहवादी रहेको भन्ने मत प्रथम-दृष्ट्या उपयुक्त लागेपनि सारमा एकाङ्गी निष्कर्ष हुनेछ । वास्तवमा वैयक्तिकता र सामुहिकताको समन्वित रुप नै हिन्दूत्वमा रहेको हुन्छ । एकातिर सामाजिक व्यवहारमा हिन्दू संस्कृति समष्टि-प्रधान रहेको छभने अर्कोतिर आध्यात्मिक प्रयोजनमा यो सदैव व्यष्टि-केन्द्रित रहेर चिन्तन गर्दछ । यसको समुचित कारण छ ।
हामीले व्यवहारमा पनि बुझ्न सक्ने कुरा होकि एक जनाको कारणले सारा समाजलाई हानि पुग्न सक्दछ वा फाइदा पनि पुग्न सक्दछ; किनकि समाजका सदस्यका रुपमा हरेक व्यक्ति-व्यक्ति अन्तरनिर्भर र सम्बद्ध छन् । तर आध्यात्मिक प्रयोजनमा यस्तो हुँदैन । प्रत्येक जीवात्मा मोक्ष वा पतनकोलागि आफूमात्र जिम्मेवार हुन्छ । मनुस्मृतिमा भनिएको छ- "परलोकमा आमा-बुबा श्रीमती पुत्र वा हितैषी-मित्रजनहरु कोही पनि सहायक हुँदैनन्; केवल धर्म मात्र साथमा हुन्छ । यो जीव एक्लै आउँछ र यहाँबाट एक्लो नै जान्छ; एक्लैले पुण्य-पापको फल पनि भोग्दछ ।" त्यसैले आध्यात्मिक प्रयोजनमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता पूर्णरुपेण प्रदान गरिएको हो ।
हिन्दू जीवनमा मानवको लक्ष्य धेरै जान्नु होइन उसको लक्ष्य त सत्य जान्नु हो । हिन्दूधर्मको लक्ष्य परम् सत्यको साक्षात्कार नै हो । यस क्रममा सत्यान्वेषणकोलागि इन्द्रियजन्य बोध सक्षम छैन भन्ने पनि उसलाई बुझाइएको हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा इन्द्रिय-सुखले सत्य-साक्षात्कारको यात्रामा मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्दछ भन्ठानिन्छ । गीतामा भनिएको छ- "इन्द्रियका इन्द्रियार्थमा राग र द्वेष दुवै छुपेका हुन्छन् ती दुवै मानिसका शत्रु हुन् तिनका वशमा नपर्नू ।" त्यसैले "जुन योगी बाह्य विषयहरुलाई त्यागेर आत्मसुखमा रमाउँछ त्यो ब्रह्मयोगयुक्त योगी अक्षय सुख पाउँछ ।" यहाँ इन्द्रियहरुलाई निषेध गरिएको होइन किन्तु तिनको अपूर्णतालाई सम्झाइएको हो ।
देह र आत्माको पृथक्ता, देहको अनित्यता र आत्माको नित्यता, आत्माको चैतन्यता तथा देहमाथि आत्माको शासन जस्ता मौलिक मान्यताहरुले वैदिक हिन्दू दर्शनलाई अन्य दर्शनहरु भन्दा पृथक् विशिष्ट स्वरुप दिएका हुन् । पश्चिमा अवधारणामा 'आत्मा'रुपी शरीरको शासक छैन जसले अचेतन वा अर्धचेतनमाथि समेत नियन्त्रण राखोस् । तर हिन्दू अवधारणामा आत्मा अचेतन वा अर्धचेतन मनद्वारा निर्देशित कि्रयाकलापमाथि समेत नियन्त्रण गर्न सक्षम छ र त्यहीको आत्माको शासनमा इन्द्रियलाई राख्नुपर्ने स्वच्छन्द छोड्नु नहुने हिन्दू मत रहेको छ । त्यस्तै हिन्दू सोच अनुसार आध्यात्मिक वा धार्मिक कर्म नै लक्ष्य हुनुपर्दछ किनभने आध्यात्मिक समुन्नतिको लागि लक्ष्य गर्दा त्यसबाट भौतिक लाभ त आनुषङ्गिक रुपमा स्वतः प्राप्त भइहाल्छ ।
उता पश्चिमा मतमा यताजस्तो 'मोक्ष' वा 'निर्वाण' सँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा छैन; त्यहाँ उद्धार (साल्भेसन) को अवधारणासम्म चाहिँ पाइन्छ । त्यसैले दार्शनिक मिल शरीर र मस्तिष्कमाथिको सम्प्रभुतालाई जोड दिन्छन् । वैदिक हिन्दू जीवनमा मोक्ष एउटा अनिवार्य एवम् परम् तत्वको रुपमा रहेको छ; यद्यपि यसको प्राप्तिको प्रकि्रयाबारेमा मत-विविधता अवश्यै छन् । त्यसैले दार्शनिक चाणक्य वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोत्कृष्ट सार्थकता मोक्षप्राप्तिमा देख्छन् । तर यहीँनेर ख्याल राख्नु पर्ने कुरा के छ भने हिन्दू जीवनमा मोक्षप्रतिको अत्यधिक आग्रहको अर्थ भौतिक जगत्प्रतिको निरपेक्षता होइन । इन्द्रियजन्य मोह वा भ्रमप्रति अनिच्छा भएतापनि मानव चेतनाप्रति वैदिक मतमा अगाध श्रद्धा रहेको छ । त्यसैले चाणक्य सामाजिक व्यवहारमा व्यक्तिको हितलाई भन्दा समाजको हितलाई महत्व दिन्छन् ।
अन्त्यमा प्रुेन्च दार्शनिक रोम्ााँ रोलाँलाई उद्धृत गर्दै बिट मारौं जसले भनेका छन्- "खासगरी केही वर्ष यता म युरोप एसियाको चेतनालाई एक-अर्काको निकट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छु । चिन्तनका यी दुई गोलाद्र्ध हुन् । यी दुईलाई एक बनाउनु आउने युगको महान् उद्देश्य हुनु पर्छ ।"
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 9:07 PM4comments links to this post
वैदिक गणित : एक चर्चा
आधारभूत गणनाको शीप मात्र हो । तर उनीहरुले जेलाई गणित ठानेका छन्, त्यो त गणितशास्त्रको विस्तृत क्षेत्रको एक भाग 'अङ्कगणित' हो । त्यसभन्दा केही जाने-बुझेकाहरुले शुद्ध र प्रायोगिक गणितको अन्तर गर्दै विविध शाखासम्म पुग्छन् । तथापि, हाम्रा गणितका शिक्षकहरु सूत्र वा साध्य -थ्योरम) रटाउनमा व्यस्त र विद्यार्थीहरु तल्ला तहमा सूत्र लगाएर हल गर्न र माथिल्ला तहमा लामा लामा थ्योरम घोक्नमा व्यस्त हुँदै गर्दा यो विषयको सुरुचिपूर्ण जीवनोपयोगी स्वरुपचाहिं कता पुगेको छ कता । यसमा सिर्जनात्मकता र कलापनि हुन्छ भन्ने चर्चा सुन्दामात्रपनि आर्श्चर्य मान्नेहरु थुप्रै छन् ।
वैदिक गणितको पुनरुज्जीवन कति सम्भव छ भन्ने सवालमा विभिन्न मतहरु रहेका छन् । कसैले अब यो इतिहासको एक कालखण्डमा विलुप्त भइसकेको र त्यसको पुनरुज्जीवन सम्भव नरहेको निराशावादी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । तर अन्य कतिपयचाहिं वैदिक गणितको पुनरुज्जीवनले मानव समुदाय समष्टिमा लाभान्वित हुने हुनाले यसले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अझैपनि साधन-श्रोतको उपलब्धतामा वैदिक गणितको पुनरुद्धार गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी नहुनुपर्ने खण्ड छैन ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 9:43 PM4comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 9:33 PM5comments links to this post
सभ्यतागत विज्ञान र 'पेटेन्ट'को लडाइँ
Retrieved from: http://www.dautari.org/2009/11/blog-post_3671.html
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:17 PM 1 comments links to this post
"मीमांसा-दर्शन निर्देशन" को तेस्रो प्रकरण
मीमांसा दर्शन निर्देशन
मीमांसा-दर्शनले चिनाएको 'यज्ञ' र 'स्वर्ग'
मीमांसा-दर्शनले यज्ञलाई बडो महत्व दिएको छ । भनिएको छ ः "स्वर्गकामोयजेत" । यसमा यज्ञ-कार्यको सम्पादनको उद्देश्य स्पष्ट रुपले स्वर्गको कामना बताइदिएको छ । तब यो कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ कि यज्ञ तथा स्वर्ग भनेर मीमांसाकारले केलाई लक्षित गरेका छन् ? यज्ञ तथा स्वर्ग लाई जनसाधारणले जुन अर्थमा बुझेका छन् त्यो कति हद सम्म ठीक छ ?
यज्ञ भारतवर्षको जीवनको एक अति प्राचीन र सर्वव्यापी अंग हो । यो कुरा त सबैलाई थाहा छ कि संसारको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेद हो । ऋग्वेदभन्दा पुरानो कुनै ग्रन्थ छैन । यो भारतवर्षीय धर्मको मूल आधार हो । ऋग्वेदबाट थाहा लाग्छकि यज्ञ भारतवर्ष निवासीहरुको सर्वोच्च धार्मिक कर्म थियो । एक हिन्दूको जीवनमा जन्मदेखि मरणसम्म जति संस्कार हुन्छन् ती सबमा यज्ञ कुनै न कुनै रुपमा समावेश गरिएको छ । भगवद्गीताका अनुसार मनुष्यको जीवननै यज्ञमय छ । ऋग्वेदले यज्ञलाई मनुष्यको सर्वप्रधान धर्मकृत्य मान्दै यज्ञबाटनै जीवन सार्थक हुने बताएको छ । यज्ञका विविध स्वरुप छन् । गीताको "सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा" वाला श्लोकको तात्पर्य यही होकि प्रजाको प्रगति र कल्याणका सबै कार्य यज्ञरुप हुन् । चाहे ऋत्विजहरुद्वारा अग्निहोत्रका रुपमा गरियोस् अथवा दैनिक जीवन-निर्वाहका क्रममा कर्तव्यपालनका रुपमा गरियोस् यी सबै कार्य यज्ञ हुन् । यस कुरामा प्रष्ट हुनकालागि मनुस्मृतिको सन्दर्भ उपयोगी हुनेछ । मनुस्मृतिमा वेदाध्ययनलाई ब्रह्मयज्ञ, तर्पणलाई पितृयज्ञ, होमलाई देवयज्ञ, अतिथि सन्तर्पणलाई मनुष्ययज्ञ भनिएका उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छकि मानव जीवनका सबै महत्वपूर्ण कर्तव्यहरुलाई यज्ञ नामले बुझाइएको छ । छान्दोग्य उपनिषद्मा मनुष्यलाई यज्ञ-स्वरुप भनिएको तथा मनुष्य-जीवननै यज्ञ भएको बताइएको छ । मीमांसा-दर्शनले यो कुरा आत्मसात् गरेको हामी पाउँछौं ।
एक अवधारणा यस्तो छकि जीवनको उत्थान देवशक्तिको कृपाले हुनसक्छ र देवशक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने मुख्य साधन यज्ञ हो । सांसारिक परिस्थितिमा रहेर जीवन निर्वाह गर्नेवाला हिन्दुकालागि देवाराधन मुख्य कर्तव्य हो र त्यसको माध्यम यज्ञ नै हो । गीतामा भगवान्ले भन्नुभएकै छ- यज्ञद्वारा देवता तिमीसँग प्रसन्न हुनेछन् र तिम्रो उन्नति तथा कल्याण गर्नेछन् । प्राचीनकालमा झैं दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध, राजसूय आदिजस्ता धूमधामका यज्ञहरु हुनेजस्तो स्थिति आज छैन ता पनि यज्ञको व्यापक अवधारणाले यो सदा सान्दर्भिक छ । यज्ञको व्यापक अवधारणा अनुसार मानव-जीवनका सबै महत्वपूर्ण कर्तव्यहरु यज्ञ हुन् ।
मनुष्यको आफ्नो कर्तव्यलाई सच्चा हृदयले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गर्नु नै वास्तविक यज्ञ हो । उदाहरणकालागि महाभारत शान्तिपर्वअनुसार प्रष्ट हुन्छकि समाजको अस्तित्व रक्षा र प्रगतिकालागि जति पनि आवश्यक कार्य छन् ती सब यज्ञरुप नै हुन् । यस दृष्टिले यज्ञको विरोध कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले गर्ने ठाउँ छैन र कुनै विवेकी व्यक्ति यज्ञका विरुद्धमा बोल्दैन । यज्ञकै नाम लिएर कतिपय गलत कार्य गरिएका वा गराइएका देखेर साराकासारा यज्ञप्रति नकारात्मक सोंच राख्नु बेठीक हो । गलत पक्ष हटाउन हिच्किचाउनु हुँदैन । तर यज्ञको महत्ता अस्वीकार गर्नु त मुर्खता हो । मुख्य कुरा भावनाको हो । जुनसुकै कर्म पनि यदि स्वार्थरहित भएर परोपकारार्थ गरिन्छ त्यसले मनुष्यलाई उच्चतातर्फ अग्रसर गराउँछ र सदैव कल्याणकारी हुन्छ । यही सदैव कल्याणकारी भावना नै हो यज्ञीय-भावना --- यसका साथमा साधारण कार्य पनि यज्ञकर्म हुन्छ१ । पूर्वमीमांसा-दर्शनबाट हामीलाई यो थाहा लाग्छ ।
अब हामी विचार गरौं- मीमांसाकारले यज्ञलाई नै प्राथमिकता किन दिए ?
यो संसारमा ज्ञान तथा योगका मार्ग अवलम्बन गर्न सक्षम व्यक्ति कमै हुन्छन् र अधिकाधिक व्यक्तिहरु त सामान्य भोग विलासमा नै रमाउने हुन्छन्; तिनीहरुकालागि वेदान्त दर्शनले बताएझैं तरिकाले ब्रह्मज्ञान एवम् आत्मज्ञान प्राप्त गर्नु कसरी सम्भव होला ! सांसारिक कर्ममा जेलिएकाहरुका निमित्त त देवाराधनको कर्मकाण्डद्वारा नै लौकिक-पारलौकिक कल्याण हुन्छ । यसै कारणलाई ख्याल राखी महर्षि जैमिनीले मीमांसा-दर्शनको आरम्भ ब्रह्म-जिज्ञासाबाट होइन, धर्म-जिज्ञासाबाट गर्नुभएको छ । लौकिक व्यक्तिहरुका निमित्त कर्मकाण्डमूलक धार्मिक-कृत्य नै उपयोगी छ र यसैबाट धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ ।
यज्ञको अर्थ तथा उपादेयता बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब स्वर्गको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । वेदमा "स्वर्गकामोयजेत" भनिएकोहुँदा यज्ञ र स्वर्गको सम्बन्ध अभिन्न रहेको स्पष्ट छ । मीमांसाकारले ठाउँ-ठाउँमा स्वर्गको बारेमा चर्चा गरेका छन् र स्वर्गको प्राप्तिकालागि विविध यज्ञहरुको विधान गरिएको छ ।
स्वर्ग भन्नासाथ मानिसहरु त्यसको अर्थ आकाशमाथिको अन्तरिक्षमा अवस्थित कुनै विशेष लोक भन्ठान्छन् । मीमांसा-दर्शनले स्वर्गको यस्तो अर्थ मानेको छैन । मीमांसा-दर्शनका भाष्यकार शवर स्वामीले स्वर्ग भनेको यस्तो विशेष लोक वा कुनै खास जमिन नभएको र निरतिशय सुखलाई नै स्वर्ग भनिएको हो भनेर स्पष्ट पारेका छन् । अर्थात् स्वर्ग प्राप्त गर्ने भन्नाको अर्थ कतिपय मानिसहरुले जुन किसिमले - मरेपछि पुण्यात्मा व्यक्ति स्वर्गमा पुगेर त्यहाँ अप्सराहरुका साथमा बसी सम्पूर्ण सुख-सुविधा भोग गर्न पाइन्छ आदिइत्यादि भन्ने गरेका छन् त्यो ठीक होइन । स्वर्गको जुन किसिमले बयान गरिने गरेको छ त्यो वास्तविक स्वर्ग-तत्वभन्दा निक्कै तुच्छ छ ।
ऋषिहरुले आफ्नो ज्ञानदृष्टिबाट वैदिक मन्त्रद्वारा प्रतिपादित धर्मलाई आत्मसात् गरी हामीलाई जुन उपदेश दिएका छन्- त्यसको उद्देश्य मरेपछि अर्को लोकमा गएर सोमरस पिउने अप्सराहरुसँग भोगविलास गर्ने धन-ऐश्वर्य उपभोग गर्ने भन्नु त ती महान् ऋषिजनप्रतिको अपमान हो किनकि यस्ता कार्य त यहीँ यसै लोकमा अधर्मीहरुले पनि गर्न सकेकै छन् नि ! भनेपछि धर्मकर्मको उद्देश्य यति सामान्य चीज पक्कै होइन -स्पष्टै छ । हाम्रा धर्मशास्त्रहरुले, हाम्रा ऋषिमुनिहरुले हामीलाई जुन उपदेश दिएका छन् त्यसको उद्देश्य समस्त मनुष्यको आत्मकल्याण हो । तसर्थ यिनले क्षणिक भौतिक सुखलाई गौण मानेका छन् र दुःखको समूल नाश अर्थात् दुःखको निवृत्तिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यही दुःखको निवृत्ति पश्चात्को निरतिशय सुखको अवस्थामा प्राप्त हुनुलाई नै स्वर्ग प्राप्ति भनिएको हो२ । यसरी मीमांसा-दर्शनको ुयज्ञु तथा ुस्वर्गु सम्बन्धी अवधारणा वैज्ञानिकताले परिपूर्ण रहेको हामी पाउँछौं ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 9:01 PM2comments links to this post
"मीमांसा-दर्शन निर्देशन" को दोस्रो प्रकरणको बाँकी अंश
इन्द्रिय तथा बाह्य पदार्थको संयोगले उत्पन्न हुनेवाला ज्ञान नित्य छैन; अनित्य छ र कुनै पनि बेला परिवर्तित हुनसक्छ । इन्द्रियहरुको शक्ति क्षीण हुँदा एकथोकलाई अर्कोथोक बुझ्ने तथा कुनै पनि इन्द्रियलाई भ्रम हुनसक्ने स्थितिलाई ख्याल गर्दा इन्द्रियहरुद्वारा जे अनुभूत गरियो त्यसलाई सत्य भनेर ठोकुवा गर्न सकिदैन ।
उदाहरणार्थ- यदि हामीले आफ्ना दुबै हातका चोर औंलालाई एकापसमा सम्मुख राखेर आफ्नो आँखा नजिक लग्यौंभने ती दुई औंलाका बीचमा एउटा औंलाको टुक्रो देखिन्छ; जबकि वास्तवमा त्यो हुँदैन । यसैगरी मरुभूमिमा यात्रा गर्दा हाम्रो आँखाले पानीको कुवा नभएको ठाउँमा पनि परबाट पानीको कुवा भएजस्तो देख्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छकि इन्द्रियद्वारा प्राप्त ज्ञानमा पूर्णतया भर पर्नु हुँदोरहेनछ । त्यस्तैगरी फगत् अनुमानका भरमा कुनै कुराको निर्णय लिनु पनि भएन । यसरी धर्मसंबन्धी निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियबाटमात्र हुने ज्ञान अथवा त्यसको आधारमा उत्पन्न हुनेवाला अनुमान प्रमाणलेमात्र काम िदंदैन । कारण के भने प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण दुबैनै भौतिक तथ्य एवम् त्यसका आधारमा गरिने कल्पनामा निर्भर रहन्छन्; जबकि धर्म पर् यो यस्तो विषय जो न त प्रत्यक्ष यी यै चीज हो भनेर देखिने चीज हो न खाँदा यस्तो स्वाद आउँछ भनेर अनुभव गर्ने वस्तु नै पर् यो । यस्तो होला वा उस्तो होला भनेर आकार-प्रकारको अनुमान गरेर पत्ता लगाउने कुरो पनि परेन धर्म । त्यसोहुँदा धर्मबारेको निर्णय यस्तो आधारमा हुनुपर् यो जसमा भ्रमको कुनै गुाजायस नहोस् । यस्तो प्रामाणिक निर्णय दिने कसीका रुपमा मीमांसाकारले वेदलाई मानेका छन् ।
मीमांसाकारको मत अनुसार भ्रमको कुनै गुाजायससम्म पनि नभएको प्रामाणिक निर्णय र आदेश त वेदको मात्र हुन सक्छ । बस् मीमांसा-दर्शनको गाँठी कुरा यसैमा छ ।
मीमांसा-दर्शनमा भनिएको छ कि वेदका प्रत्येक शब्द आफ्ना अर्थसँग स्वाभाविक सम्बन्ध राख्दछन् । यो ईश्वरोपदिष्ट धर्मको यथार्थ साधन हो । वेदको आदेश आफ्नो अर्थसत्यताका कारण स्वतः प्रमाण छ । वेदको कुनै पनि भाग अप्रामाणिक छैन धर्मसँग असंबन्धित छैन । वेद नै पुरुषार्थ चतुष्टय- धर्म अर्थ काम मोक्ष -प्राप्तिको एकमात्र साधन हो । जो व्यक्ति अर्थ बुझेर वेदको आशयलाई राम्ररी हृदयंगम गर्दछ उसलाई जीवनको सफलता सार्थकताको सच्चा मार्ग प्राप्त हुन्छ । अर्थात् वेद नै धर्मको सम्बन्धमा प्रमाण हो । तसर्थ वेदले निर्देशित गरेअनुसार कार्य गर्नु नै धर्म हो । अर्थात् चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः को कसी वेद हो भनेर मीमांसा-दर्शनले ठोकुवा गरेको छ ।
वेद नै धर्मको सम्बन्धमा प्रमाण हो र वेदले निर्देशित गरेअनुसार कार्य गर्नु नै धर्म हो भन्ने मीमांसा-दर्शनको भनाइ उपर कतिपयले प्रश्न उठाउन सक्छन्कि किन वेदलाई नै धर्मको सम्बन्धमा प्रमाण मान्ने के कारणले गर्दा यो प्रामाणिक भएको हो र अरु नभएका हुन् मीमांसाकारले यसको जवाफ दिएका छन् । वेदलाई नै प्रामाणिक मान्नुमा कारणहरु छन् ।
एक त वेदमा कुनै पनि वाक्य निरर्थक छैन । हो कसैले आफ्नो अयोग्यताका कारण वेदका कुरा बुझ्न नसक्नाले निरर्थक पनि भन्देला; तर त्यो त चमेराले सूर्य उदाउनुलाई निरर्थक भनेजस्तो हो । चमेराले निरर्थक ठान्दैमा सूर्योदय निरर्थक हुँदैन । वेद वाक्य सबै सार्थक छन् । अर्को कुरा वेदमा कुनै व्यक्ति विशेष वा राजा आदिको वर्णन गरिएको छैन र कुनै कालविशेषमा घटित घटनाको चर्चा पनि छैन । वेदमा जहाँकहिँ पनि व्यक्ति अथवा घटनाहरुको जुन कुरा छ त्यो वास्तवमा त्यस्तो होइन ती सब यौगिक र सामान्य अर्थवाला हुन् भन्ने मीमांसाकारको मत छ । हुनसक्छकि ती व्यक्तिका नामसँग मिल्दाजुल्दा होऊन् तब पाठकहरु भ्रममा पर्छन्कि हो न हो यो कुनै ऐतिहासिक व्यक्तिको नाम हो । भुज्य तुग्र सुदास इन्द्र आदि यस्तै हुन् ।१ यिनको अर्थ यौगिक रुपले गर्नु पर्दछ । वास्तविक अर्थ गर्न नसक्नेहरुकालागि वेदका शब्द एवं वाक्यका अर्थ नलाग्लान् वा उल्टा अर्थ लाग्ने पनि प्रबल सम्भावना हुन्छ;२ तर सही रुपले वेदको अर्थ लगाउन सक्ने सामथ्र्य भएकाहरुकालागि वेद-वाक्य सबै सार्थक छन् भन्ने मीमांसाकारको भनाइ हो ।
मीमांसा-दर्शनका अनुसार सबभन्दा मुख्य कुरा त वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वरप्रदत्त हुनाले स्वतः प्रामाणिक ग्रन्थ हो३ । तर कतिपयले प्रश्न खडा गर्न सक्छन्कि वेद अपौरुषेय हो भन्ने के प्रमाण छ यस्तो प्रश्न गर्नेहरु जहाँ-तिहं भेटिनेछन् । यो प्रश्न आजमात्र गरिएको प्रश्न होइन । आचार्य कुमारिललाई पनि यो प्रश्न गरिएको थियो र शास्त्रार्थमा वेद अपौरुषेय भएको प्रमाणित गरेर नै उहाँले आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरुलाई पराजित गर्नुभएको थियो । प्रथम मीमांसाकारका सामुन्नेमा पनि यस्ता प्रश्न पक्कै आएका हुँदाहुन् । ती प्रश्नहरुलाई तर्कपूर्वक शमन गरेरमात्र यो दर्शन सु-स्थापित भएको हो । स्वयम् ऋग्वेदमा मन्त्र-द्रष्टा ऋषिले यी सूक्तहरु हाम्रा खोज हुन् रचना होइनन् भनिराखेको अवस्थामा यथार्थ छर्लङ्गै छ ।
वेदका सम्बन्धमा के भ्रम फैलाइएको छ भने यसका ऋचाहरु ऋषिहरुद्वारा रचित भएकाले उनीहरुद्वारा रचित वेद अपौरषेय हुन सक्दैन । यो भ्रमित पार्ने तर्क अर्थात् कुतर्क मात्र हो । वास्तवमा वेद-मन्त्रहरुमा जति पनि ऋषिहरुको नाम दिइएको छ उनीहरु ती मन्त्रका ुकर्ताु वा स्रष्टा होइनन् कि ुद्रष्टाु हुन्; अर्थात् उनीहरु तत्तत् मन्त्रका विधिवत् प्रचारक थिए । जो स्वयम्भू सर्वव्यापक शुद्ध सनातन निराकार परमेश्वर छन्- उनैले सनातन जीवरुप प्रजाको कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याहरुको उपदेश गर्दछन् भन्ने वैदिक वचन यहाँ स्मरणीय छ । वेदलाई ुश्रुतिु नामाकरण गरिनुले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । यसबाट विदित हुन्छकि ऋषिहरुले वेद-मन्त्र सुनेपछि लोकहितार्थ त्यसको प्रचार गरेका थिए; उनीहरुले वेदकै रचना गरेकाचाहिँ होइनन् । वेद वास्तवमा कहिल्यै कसैद्वारा रचिएको होइन र अनादिकालदेखि यसै स्वरुपमा मानवसमक्ष छ । वेदका प्रत्येक शब्द अनादि छन् र एक निश्चित अर्थलाई प्रकट गर्दछन् ।
आचार्य कुमारिलका शब्दमा ः-
सर्वेश्वर प्रणीतत्वे प्रामाण्यमपि सुस्थितम् ।
प्रमाण्यं विद्यतेनेति पौरुषेयेष्ायुज्यले ॥
वेदेवक्तुभावाच्च तद्वार्वापि सुदुर्लभा ।
वेदस्य नित्यता प्रोक्ता प्रामाण्येनापयुज्यते ॥
यसको भावार्थ यही हो कि ईश्वर प्रणीत भएकाले वेद पूर्णतः प्रामाणिक छ; वेद बनाउनेवाला कुनै व्यक्ति पाइँदैन; वेदलाई नित्य भनिन्छ र यही तिनलाई अपौरुषेय र प्रमाणस्वरुप मान्न पर्याप्त छ । यसरी वेद स्वयं परमात्मा परमेश्वरद्वारा रचित हो भन्ने प्रमाणित भएपछि वेद नै धर्मको सम्बन्धमा प्रमाण हो र वेदले निर्देशित गरेअनुसार कार्य गर्नु नै धर्म हो भन्ने मीमांसा-दर्शनको मत प्रतिष्ठित हुन्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा धर्मको निर्णय र आचरण वेदको आधारमा मात्र गर्नुपर्दछ भन्ने मीमांसा-दर्शनको दृढ मत हो । वेदमा ईश्वरोपदिष्ट धर्मको यथार्थ स्वरुप छ । वेदको कुनै पनि भाग अप्रमाणित छैन एवम् धर्मसँग असम्बद्ध छैन । वेद वाक्य सबै सार्थक छन् । ईश्वरतत्वको प्राप्ति नै वेदको हेतु हो ।
मीमांसा-दर्शनको दृढ मत छकि वैदिक विधानहरुलाई बुझ्न तथा विस्तृत व्याख्या गर्नकालागि अन्य ग्रन्थहरु पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ता पनि ती ग्रन्थहरु त्यति हदसम्ममात्रै मान्य हुन्छन् जबसम्म ती वेदानुकूल छन् । यदि कुनै कुरा वेदले एकथोक भन्दछ र अर्को ग्रन्थले अर्कैथोक भन्दछ भने वेदको विपरितचाहिँ कुरा अमान्य ठहर्छ । अर्थात् वेदका सामुन्ने अरुको प्रमाण चल्दैन; वेदले जे भन्दछ त्यही प्रमाण हो । तर वेदका शब्द तथा वाक्यहरुका अर्थ लगाउँदा विशेष सावधानीपूर्वक गर्नुपर्दछ । नत्र त आनकातान फरक पर्न गई अर्थको अनर्थ हुन्छ । मीमांसाकारले भनेका छन्कि वेदमा प्रायः रुपकबाट वर्णन भएको छ यदि त्यसलाई नबुझी अर्थ गर्ने हो भने त के के हुन्छ के के । आँखा भन्ने ठाउँमा सूर्य हुनसक्छ र सूर्य भनेर अर्थ गर्नुपर्ने ठाउँमा आँखा हुनसक्छ । सैन्धव भन्ने एउटै शब्दको अर्थ नून पनि हुन्छ र सिन्धुदेशीय घोडा पनि हुन्छ; अब तरकारी पकाउँदा सैन्धव मागेको छभने नून दिनुपर् यो र यात्राका निमित्त सैन्धव मागेको छभने घोडा दिनुपर् यो । यसरी अर्थ नगरेर जथाभावी अर्थ गर्दिने होभने त गडबड भइहाल्छ नि ! भएको पनि यस्तै छ । अहिले वेदउपर आक्षेप गर्नेहरुले यस्तै उल्टोपाल्टो अर्थ लगाएर वेदलाई बुझ्दैनबुझी अनेक दोष देखाउने गर्दछन् । यदि वास्तविक अर्थ बुझ्ने क्षमता हुने होभने वेदजति वैज्ञानिक एवम् प्रामाणिक अर्को केही छैन । वेद नित्य छ । वेद शाश्वत छ । वेद सनातन छ ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 12:04 AM0comments links to this post
आयोदधौम्य निर्मलमणि अधिकारीकृत पुस्तक "मीमांसा-दर्शन निर्देशन" को दोस्रो प्रकरणबाट
(आयोदधौम्य निर्मलमणि अधिकारीकृत पुस्तक मीमांसा-दर्शन निर्देशन वि.सं. २०६२ मा प्रकाशित भएको थियो ।)
मीमांसा-दर्शनको दृष्टिमा धर्म र वेद
मीमांसा-दर्शनको प्रथमसूत्रमै अथातो धर्म जिज्ञासा भनिएको छ । यसरी धर्मबारेमा विचार गर्नु मीमांसा-दर्शनको पहिलो कार्य हो । त्यसपछि तत्कालै भनिएको छ - चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मःु। शाब्दिक अर्थको पछिल्तिर लाग्नुअघि हामी यस सूत्रलाई बुझ्ने प्रयास गरौं ।
धर्म प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै मनखुशी इच्छा वा रुचिमा निर्भर चीज होइन यो त एक नैतिक नियम हो जसको पालना गर्नु समाजमा रहनेवाला मनुष्यकालागि आवश्यक छ । कुनै कार्य यस्ता हुन्छन् जो मनुष्यले प्राकृतिक प्रेरणाले विवश भएर गर्नु पर्दछ जस्तोकि खानु पिउनु सुत्नु शौच आदि कार्य । कुनै नियमचाहिँ यस्ता हुन्छन् जो मनुष्यले राज्य अथवा शासनको आज्ञाका कारणले मान्नु पर्दछ । कुनै नियम आफू रहेको समाजका सामाजिक तथा पारम्परिक विशेषताका कारण मानिएको हुन्छ । अर्काखाले कार्य यस्ता हुन्छन् जो प्राकृतिक अथवा राज्यका दबाबका कारणले नभएर नैतिक नियमवश गरिनकालागि प्रेरणा दिइन्छ; उदाहरणार्थ- दया परोपकार दान उदारता संयम क्षमा अिहंसा आदि । मान्छेको जीवनमा यी सबैखाले नियमहरुको विशेष महत्व छ । यी नियमहरुको पालना गर्ने सवालमा जैमिनीको भनाइ बडो युक्तियुक्त छ कि जो कार्य लोकोपकारी उपदेशकहरुको प्रेरणा या आदेशलाई मानेर गर्नुपर्दछ त्यो नै धर्म हो । तसर्थ भनियो कि प्रेरणा या उपदेशवाला अर्थ नै धर्म हो; - चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छकि आफूलाई लोकोपकारी भन्ने दाबी गरेर उपदेश या प्रेरणा दिनेहरुमध्येबाट पनि फरक फरक उपदेश या प्रेरणा प्राप्त भएमा के गर्ने नि अनि कसैको मत लोकोपकारी हो वा होइन भनेर निर्णय कसरी गर्ने यसको जवाफ मीमांसाकारले दिएका छन् । ............. (क्रमश:)
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 2:41 AM0comments links to this post
(आयोदधौम्य निर्मलमणि अधिकारीकृत पुस्तक मीमांसा-दर्शन निर्देशन को पहिलो प्रकरण । यो पुस्तक वि.सं. २०६२ मा प्रकाशित भएको थियो ।)
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 12:50 AM0comments links to this post